Seho nahemotra :: Mbola manan-kery ireo tapakila efa lafo • AoRaha
Mihemotra amin’ny daty tsy voafaritra ny ankamaroan’ireo fampisehoana lehibe saika notontosaina teto an-drenivohitra, amin’ity volana ity, noho ny fisian’ny valanaretina «Coronavirus». Nanambara ireo mpikarakara lanonana fa manankery avokoa ireo tapakila ela lafo, mialoha ny fampisehoana. «Tsy misy intsony ny fikarakarana manokana ho an’ny fampisehoana saika hatao amin’ny alahady 28 marsa ho avy izao. Milamina ny zavadrehetra. Hamafisiko fa manan-kery hatrany ireo tapakila efa eny an-tanan’ny mpividy amin’ny fotoana hamerenana ny fampisehoana. Miandry ny fotoana higadonany isika dia raikitra e!», hoy i Lôla, nikasa hankalaza ny faha-20 taona nihirany etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina, amin’ny 28 marsa 2020.
Ankoatra izay, isan’ ireo tsy afa-manoatra fa tsy maintsy nampihemotra ny fampisehoana tokony hataony ihany koa ny tarika Ambondrona. Nisy ireo tapakila efa lafo tamin’izany, saingy manome toky an’ireo mpankafy ny mpikarakara fa homena tombony manokana izy ireo.
«Hahazo tombony ireo mpankafy mahatahiry ny tapakila amin’ny fampisehoana saika hataon’ny tarika Ambondrona, tokony hotontosaina etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe, amin’ny 5 avrily 2020. Hampidirina amin’ny vavahady voatokana mihitsy izy ireo, amin’ny andron’ny fampisehoana », araka ny fanazavana nomen’ i Beranto, mpikambana ao amin’ny tarika Ambondrona.
Fivoaran’ny valanaretina :: Niampy efatra ireo voan’ny « Coronavirus »
Famoahana hira :: Manolotra ny « Lapa vaovao » i Mamina